IBC2019: Fanohanan'ny Cobalt nomerika vaovao hanohanana ny arintany 4K ho an'ny fampiharana studio sy finday - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » IBC2019: Manohana ny bokotra 4K ho an'ny Studio sy fampiharana amin'ny finday ny vahaolana vaovao Cobalt Digital Solutions Digital Cobalt.
IBC2019: Manohana ny bokotra 4K ho an'ny Studio sy fampiharana amin'ny finday ny vahaolana vaovao Cobalt Digital Solutions Digital Cobalt.
CHAMPAIGN, Ill. - Aog. 13, 2019 - Digital Cobalt dia hampiseho ny vahaolana vita amin'ny 4K sy HDR workflow ho an'ny rindran-tsary openGear® amin'ny volana manaraka amin'ny IBC2019 ao Amsterdam (Mitsangana 10.B44). Ny fampahafantarana ny vokatra dia hampiditra ny dekoder sy encoder vaovao azy, RIST Main Profile, vahaolana fiovam-po SDR / HDR bi-directional ho an'ny famokarana mivantana, ary ireo multiviewer vaovao sy mpanamafim-pamokarana vaovao. Fanampin'izay, hanomboka ny orinasa 12G openGear router sy ny valin'ny vavahady RIST.
Ny andian-tsarimihetsika 9992-DEC vaovao amin'ny HEVC / AVC / MPEG-2 ho an'ny efijery openGear dia hampidirina amin'ny fampisehoana. Tahaka ny andian-tsarimihetsika 9992-ENC ao amin'ny orinasa, ny 9992-DEC manana làlan-kaleha azo asongadina ny fahazoan-dàlana fandoavan-karama, ka ny mpampiasa ihany no mandoa ny fepetra ilaina rehefa ilaina izany. Natao hanatrarana ireo fepetra takina henjana indrindra ho an'ny mpampita ankehitriny, ny 9992-DEC dia manohana hatramin'ny famandrihana 4K ary manome fahafenoana feno ny fahaizan'ny fanodinana audio. Ahitana ny andiany 9992-2DEC decoder andalana 9992-4DEC, ary koa ny 4-DEC-2K-HEVC miaraka amin'ny fantsona 265K na channel roa XNUMXK sy ny fanohanana an'i H.XNUMX.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Cobalt dia iray amin'ireo orinasa maro nahazo ny Emmy® Award noho ny fiaraha-miasa amin'ny ARQ, ny teknolojia fototra. Ao amin'ny IBC, Cobalt dia hanomboka ny fanohanana ny RIST Main Profile, izay manampy ny endri-javatra toy ny encryption (DTLS na PSK), ny fitrandrahana, ny mpamadika an-tsarintany, ny fitsinjarana-fanamafisana, ny fihenam-bidy bitika ary ny fitaterana ST-2110 azo antoka.
Ny fandrosoana vaovao ao amin'ny HDR amin'ny fampisehoana dia ahitana ny fidirana HDR farany mifarana hatramin'ny farany ka ao anaty Cobalt's 9904-UDX-4K ambony / ambany / cross converter. Mampiasa ny fitaovana mety amin'ny HDR, izay azo ampidirina amin'ny safidy fibaikoana ny 9904, ny XNUMX dia afaka mamorona metadata mavitrika rehefa miova avy amin'ny HDR ka SDR ary miverina amin'ny HDR, mitahiry ny fampahalalana feno ny sary HDR.
Cobalt dia manohy mamolavola ny 9971 Series malaza amin'ny multiviewer, manome famoahana dobilo roa sy fanaraha-maso ny mpampiasa. Fanaterana ny fanaraha-maso tsy misy fepetra ny 4K asynchronous ary HD fambara, modely telo rehetra mipetraka amin'ny alàlan'ny marika sy fampiharana maro samihafa. Ny modely rehetra ihany koa dia misy HDMI ny vokatra ho an'ny fijerena ara-toekarena amin'ireo mpanara-maso 4K ho an'ny mpanjifa. Ny maody bokotra iray dia mitahiry hanamora ny fananganana azy, fa ny mpampiasa dia afaka mamorona sy mitahiry fandaharana natao ihany koa. Mihoatra ny dimy 9971 dia azo apetraka amin'ny rindran-tsary openUear 2 RU - ary ny karatra marobe ao amin'ny rojo vy iray dia afaka manome lamina multiviewer hatramin'ny loharano 64.
Ny andiany 9915 Series an'ny DA dia manohana ny loharano 4K 12G-SDI ary mamela ny varahina dia mihazakazaka ela tokoa hahatratrarana ny ankamaroan'ny fitaovana ao anatin'ny fifehezana tompo. Iray amin'ireo modely efatra ao amin'ilay andiany, ny 9915DA-4 × 16-XPT-12G, dia misy fantsona efatra azo zahana amin'ny alàlan'ny vokatra 16 DA amin'ny fanamafisana marobe. Hatramin'ny karatra 10 dia azo apetraka amin'ny endrika openGear tokana, ahafahana miditra hatramin'ny fantsona 40 fidirana sy fizarana hatramin'ny famoahana 160.
"Mandray ny 4K ny Broadcasters ankehitriny ary ny Cobalt dia manana menu maro amin'ny vahaolana openGear miorina amin'ny studio sy ny famokarana finday," Chris Shaw, filoha lefitry ny varotra sy ny marketing, Digital Cobalt. "Ny vokatra ataonay dia manome fomba mora sy mahomby amin'ny fizarana sy fanaraha-maso ary ny fizarana ny atin'ny 4K sy HDR."
Ny vokatra hafa ao amin'ny trano Cobalt dia ahitana karatra 12G-SDI openGear vaovao misy karatra misy 12 × 12. Namboarina hifanaraka amin'ny talen'ny lova, ny karatra dia manampy ny mpanjifa hampiasa ny nosy 4K amidy mahomby. Maneho ny fitarihana ny teknolojia RIST, ny Cobalt dia manangana SafeLink, vahaolana openGear izay afaka mandray renirano fitaterana maro ary manome endrika fonosana RIST hiarovana ny rohy misy eo anelanelan'ny teboka roa.
Digital Cobalt Inc. dia mamolavola sy manamboatra fitaovam-pandrosoana nahazo alalana izay manampy mivantana ny famokarana horonan-tsary sy ny fanaraha-maso ny mpanjifa mpanjifa amin'ny IP, 4K, HDR, ny rahona, ary ny sisa. Amin'ny maha-mpanohana azy ao amin'ny openGear® ary mpikambana mirehareha amin'ny SMPTE, Cobalt koa dia manolotra sehatra iraisam-panamboarana tsara indrindra izay manatsara ny fananganana teknolojia. Ampitahaina amin'ny tambajotra manerantany, mpanentana sy mpanara-maso hafa, Digital Cobalt Ny vokatra dia voatery hanome fiantohana dimy taona. Mianara bebe kokoa amin'ny www.cobaltdigital.com.
Fihaonambe SVG: FOR-A hanoherana ny laharam-pamokarana mifangaro tanteraka - Desambra 6, 2019
ASG Sambatra ny Veteran Indostria Steve Young mba hitarika ny asa aman-draharaha momba ny Fampidirana rafitra - Desambra 3, 2019
Mametraka ny tontolo iainana famokarana lavitra amin'ny fampiasa amin'ny Fitaovana Sony - Novambra 27, 2019
12G-SDI 4K CES2017 Digital Cobalt Cobalt Encoder decoder Encoder Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor HDR IBC isovideo, viarte, HDR, tabataba fampihenana, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC, 2015, bitrate fampihenana, immersive, UHD / 4K / HD, H264 / H265, Warsaw Multiviewer RIST SoftAtHome, MStar, CES2017 Spears & Arrows fanadihadiana, Digital Nirvana, fanarahamaso ny media, IBC TVU Networks	2019-08-13
Previous: 1606 Studio dia mankalaza ny faha-enina volana mahomby amin'ny asa ho an'ny BMW, UCSF Fahasalamana, Carl's Jr ary maro hafa.
Next: Ny legiona VFX dia mamorona fiantraikany amin'ny 'ny sakafo namboarina an'i Amerika,' ny andiany vaovao amin'ny Fitaovana Mini Mini Series